जापानको रेल र ट्रेन स्टेसनसंग सम्बन्धित ६ रोचक तथ्य: | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानको रेल र ट्रेन स्टेसनसंग सम्बन्धित ६ रोचक तथ्य:
जापानको JR ले २०१५ को अप्रिलमा संसारकै सबै भन्दा छिटो ट्रेन कुदाएर रेकोर्ड बनाएको थियो। यो ट्रेनलाई म्यग्लेभ ट्रेन भनिएको थियो। यसको परिक्षन गर्दाको गति ६०० किलोमिटर प्रति घण्टा थियो। अचम्मको कुरा यो ट्रेन ले भुइँ छुदैन। चुम्बकको साहयताले यो ट्रेन जमिन भन्दा केहि सेन्टिमिटर माथि रहेरै कुद्दछ। चिन र कोरियामा पनि जापानको भन्दा कम गति क्षमता भएको यस्ता म्याग्लेभ ट्रेन चलाईएका छन्।
तर जापानी ट्रेनको गति मात्र आश्चर्य लाग्ने कुरा भने होइन। आज हामी हजुरहरुलाई जापानको रेल र स्टेसन संग सम्बन्धित केहि रोचक कुराहरु बताउने छौ। थाह पाई राख्नु है त।
१. वर्षमा दुई दिन मात्र खुल्ने स्टेसन
मितोयो कागावा प्रान्तमा रहेको चुशीमानोमिया स्टेसन वर्षको दुई दिन मात्र खुल्ने गर्दछ। यो स्टेसन हरेक वर्ष अगस्ट महिनाको ४ र ५ गते खुल्दछ। यो बेला यहाँ नजिकैको चुसिमा मन्दिरमा ठुलो समर मेला लाग्ने गर्दछ। यो स्टेसनमा JR शिकोकुको योसान लाईनको ट्रेनहरु चल्दछन।
२. संसारकै व्यस्त ट्रेन स्टेसन
सिन्जुकु ट्रेन स्टेसनलाई संसारकै सबै भन्दा व्यस्त ट्रेनस स्टेन भनेर गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड र्राखेको छ। उसको अनुसार शिन्जुकु ट्रेन स्टेसन हरेक दिन ३० लाख मानिसले प्रयोग गर्दछन।
कुरा यति मात्र होइन, २०१३को एउटा रोपोर्टले संसारको ५० व्यस्त स्टेसनहरुको सुचीमा जापानको ४५ वटा स्टेसन रहेको जनाएको छ। टप पाचको सुचीमा क्रमश १) शिन्जुकु २)शिबुया ३)इकेबुकुरो ४) उमेदा र ५)योकोहामा स्टेसन पर्दछन।
३. संसारकै लामो झुण्डिएको मोनोरेल
संसारकै सबै भन्दा लामो झुण्डिएको मोनोरेल जापानको चिबामा रहेको चिबा अर्बान मोनोरेल हो। यसको ट्रयाकको लम्बाई १५.२ किलोमिटर छ। यो रेलवेमा १८ वटा स्टेसन रहेको छ। यो ट्रेनबाट हजुरले चिबाको सुन्दार सहर हेर्न सक्नु हुने छ। यो नौलो ट्रेनको अनुभब एकचोटी भएपनि पक्कै गर्नु होस्।
चिबा अर्बान मोनोरेलको वेबसाईट
४. सबै भन्दा लामो र छोटो स्टेसनको नाम
जापानको सबैभन्दा लामो नाम रहेको स्टेसन “मिनामी आसो मिजुनो उमारेरु सातो हाकुसुइ कोगेन” स्टेसन हो। यो कुमामोतोको मिनमिआसो क्षेत्रमा पर्दछ। यो जापानको सबै भन्दा ठूलो ज्वालामुखी माउण्ट आसोको फुटहिल हो। यहाँ तकमोरी लाईनका ट्रेन चल्दछन।
त्यसैगरी जापानकै छोटो नाम भएको ट्रेन स्टेसन “चु” हो। यो मिए प्रान्तमा पर्दछ। यो स्टेसन जापानी लिपि हिरगाना वा खान्जिको एउटा मात्र क्यारेक्टरले लेख्न मिल्दछ। एउटा मात्र खान्जिकोअक्षरले लेख्न मिल्ने अरु थुप्रै स्टेसन भएता पनि एउटामात्र हिरागानाले लेखिने स्टेसन यो मात्र हो।
मिनामी आसो मिजुनो उमारेरु सातो हाकुसुइ कोगेन जाने तरिका
चु स्टेसन जाने तरिका
५. चार स्टेसन; एउटा नाम
जापानमा चार स्टेसनको नाम एउटै रहेको छ। यी चारै फरक फरक ठाउमा रहेको स्टेसनको नाम सियाकुशो-माए रहेको छ। खास गरि सीयाकुशोको अर्थ नगरपालिका हो। अनि माएको अर्थ अगाढी हो। त्यसैले नगरपालिका अगाढीको स्टेसनलाई सियाकुशो माए भन्ने गरिएकोले थुप्रैको नाम एउटै रहन गएको भनिन्छ।
६. धकेल्ने मान्छे
जापानको ट्रेन स्टेसन निकै व्यस्त हुने गर्दछ। बिहान अफिस जाने समय र फर्किने समय धेरैको मिल्ने भएकोले यस्तो टाईममा रसआवरनै हुन्छ। स्टेसन मानिसको जनसागरले भरिएको हुन्छ। धेरै जनाले एकै चोटी सवार गर्ने भएकोले मानिसहरु सबै अटाउदैनन। त्यसको लागि स्टेसनमा मानिसहरुलाई ट्रेन भित्र ठेल्न भनेर मान्छे खटाईएको हुन्छ। उनीहरुलाई “पुसर” वा “ओशिया” पनि भनिन्छ।
Minami Aso Mizu No Umareru Sato Hakusui Kogen Station